တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ရောက်ဂါကာကွယ်ဆေးများ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ထပ်မံရောက်ရှိ၊ စီးပွားရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ဖနွမ်းပင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများအား သယ်ယူပို့ဆောင်နေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ကာကွယ်ဆေးအသစ်များ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားအနေဖြင့် ယခုနှစ်မကုန်မီ နယ်မြေအားလုံး၌ လူမှု-စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အစိုးရထံ လှူဒါန်းသော Sinovac ကာကွယ်ဆေး ၂ သန်း ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (MoH) အတွင်းဝန် Yok Sambath က ဖနွမ်းပင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်၌ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီလှူဒါန်းခြင်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြားက မချိုးဖျက်နိုင်တဲ့ သံမဏိချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရဲ့ သက်သေအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ယခုချိန်အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ COVAX အစီအစဉ်နှင့် လှူဒါန်းမှုများမှတစ်ဆင့် အရင်းအမြစ်သုံးခုမှ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၃၇.၆ သန်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများအနက် ၂၈.၅ သန်း သို့မဟုတ် ၇၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရရှိထားသော Sinovac နှင့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများဖြစ်ပြီး ၆.၃ သန်း သို့မဟုတ် ၁၆.၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းထားခြင်းကြောင်း MoH ထံမှ သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလက စတင်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူ ၁၃.၅ သန်းရှိပြီး နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၁၆ သန်း၏ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း MoH က ဆိုသည်။
ယင်းအနက် လူဦးရေ ၁၂.၁ သန်း သို့မဟုတ် ၇၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကာ ၁.၁၄ သန်း သို့မဟုတ် ၇.၁၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း MoH က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း လွှမ်းခြုံမှုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသူများအတွက် နယ်စပ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း Sambath က ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရအကြီးအကဲ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Phay Siphan က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက် တက်ချို ဟွမ်ဆန် (Samdech Techo Hun Sen) ၏ ဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝစွာ ဦးဆောင်မှုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အခိုင်အမာပံ့ပိုးမှုများကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုမှာ “ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု” ကို တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ပူးတွဲတိုက်ဖျက်ရေးဟာ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စံပြဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အဖွဲ့၏ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က “WHO အနေဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း သက်ရောက်မှုတွေကို မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်သလို ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံထားသူများအကြား ရောဂါအခြေအနေဆိုးဝါးမှု၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ရမှုနှင့် သေဆုံးမှုများကို လျှော့ချရေးမှာ အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးလွှမ်းခြုံမှုမြင့်မားခြင်းဟာ စီးပွားရေးနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘေးကင်းစွာနဲ့ တာဝန်သိစွာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် အခြေခံကောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“သို့ရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစည်းဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်အခြေစိုက် Asian Vision Institute ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်လေ့လာရေးဆိုင်ရာ မဲခေါင်စင်တာရှိ သုတေသနအဖွဲ့ဝင် Thong Mengdavid က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် စင်ကာပူနိုင်ငံပြီးနောက် အာဆီယံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အရေအတွက် ဒုတိယမြောက် အမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အခြား SMEs စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်စတင်ရန်စဉ်းစားထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
“ဒီအစီအစဉ်တွေက နိုင်ငံတိုးတက်မှုနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို အားသစ်လောင်းပေးခြင်း၊ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စီးပွားရေးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Sar Lina ဆိုသူသည် ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် နေထိုင်သော အသက် ၃၀ အရွယ် ဆံပင်အလှပြင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Lina နှင့် ၎င်း၏ ခင်ပွန်းတို့သည် Sinovac ကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်သလို ၎င်း၏ ကလေးနှစ်ဦး အသက် ၆ နှစ်နှင့် ၁၀ နှစ်အရွယ်တို့သည်လည်း Sinovac ကာကွယ်ဆေးအား နှစ်ကြိမ်လုံးထိုးနှံထားကြပြီးဖြစ်သည်။
“ကျွန်မရဲ့ အလုပ်က ဒီရောဂါနဲ့ထိတွေ့နိုင်ဖို့တော်တော်လေးများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မနေ့တိုင်း ဖောက်သည်တွေနဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့နေရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးက ကျွန်မအသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Sinovac ကာကွယ်ဆေးနဲ့ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့နောက် အခုတော့ စိတ်ချရပြီလို့ခံစားရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
Lina က ၎င်း၏အသက်နှင့် မိသားစုကို ကူးစက်မြန်ရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Sinovac ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးကင်းစိတ်ချမှု၊ အရည်အသွေးနဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မှုအပေါ် လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းလည်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်း မြင့်မားလာတဲ့အတူ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ လူမှု-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု Lina က ဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားသူအသစ် ၂၆၈ ဦး ရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရောဂါအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၁၁၅,၈၇၅ ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းနေ့တွင်ပင် သေဆုံးသူ ၂၅ ဦးထပ်ရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် စုစုပေါင်းမှာ ၂,၅၈၂ ဦးအထိရှိလာကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-14 21:21:06|Editor: huaxia
PHNOM PENH, Oct. 14 (Xinhua) — A new batch of2million doses of China-donated Sinovac COVID-19 vaccine arrived in Cambodia on Thursday as the Southeast Asian nation has planned to reopen its socio-economic activities in all areas by year’s end.
“It’sanew batch of2million doses of Sinovac vaccine, which is donated by the Chinese government to the Cambodian government,” Cambodian Ministry of Health (MoH) secretary of state Yok Sambath told reporters at the Phnom Penh International Airport.
“This donation isanew testament to the unbreakable ironclad friendship between Cambodia and China,” she said.
To date, Cambodia has receivedatotal of 37.6 million doses of COVID-19 vaccines from three sources through bilateral procurement, the World Health Organization (WHO)’s COVAX Facility, and donations.
Government chief spokesman Phay Siphan said the country has seena“great success” in its vaccinations against COVID-19 thanks to the wise leadership of Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen and the strong support from China.
“I can say that our joint COVID-19 fight should serve asarole model for international cooperation,” he told Xinhua.
World Health Organization (WHO) Representative to Cambodia Li Ailan said the WHO has seen the impacts of Cambodia’s COVID-19 vaccinations, which helped the reductions of severe disease, hospitalizations, and deaths among those fully vaccinated.
“Cambodia’s high vaccination coverage providesagood basis for reopening economy and society safely and responsibly,” she said.
“However, COVID19 vaccination alone is not enough. We needagood combination of vaccination, public health and social measures, and health care capacity,” she added.
“With its high vaccination rate, Cambodia is considering resuming its nationwide economic activities soon including tourism, manufacturing, construction and other SMEs business,” he told Xinhua.
“The plans would help rejuvenate national growth and resilience, enhance social development and promote business-friendly activities for future foreign investment from both regional and international contexts,” he added.
“My job is at high risk of catching this disease because I’m in close contact with customers every day, so the vaccine is really essential to protecting my life,” she told Xinhua. “I feel quite safe now after having receivedabooster dose with Sinovac vaccine.”
Lina said she’s totally confident in the safety, quality and efficacy of the Sinovac vaccine in protecting her life and family from this highly contagious disease.
“I hope that with its high vaccination rates, Cambodia will be able to reopen its socio-economic activities in all domains in the near future,” she said.
Cambodia confirmed 268 new COVID-19 cases on Thursday, pushing the national total caseload to 115,875, the MoH said, adding that 25 more fatalities had been recorded, bringing the overall death toll to 2,582. Enditem
1-3- An airport worker transports packages of Sinovac COVID-19 vaccine at Phnom Penh International Airport in Phnom Penh, Cambodia, on Oct. 14, 2021. A new batch of2million doses of China-donated Sinovac COVID-19 vaccine arrived in Cambodia on Thursday as the Southeast Asian nation has planned to reopen its socio-economic activities in all areas by year’s end. (Photo by Phearum/Xinhua)